माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ कोरोनाको भुमरीमा,निर्माण बन्द - Arthasansar
माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ कोरोनाको भुमरीमा,निर्माण बन्द
बुधबार, २८ असोज २०७७, १४ : ०० मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं– -गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पहाडी जिल्ला लमजुङस्थित दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजनाको निर्माण बन्द भएको छ । लिबर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित आयोजनामा कार्यरत २७ कर्मचारीमा मङ्गलबार साँझ एकै पटक कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि आजदेखि आयोजनाको निर्माण बन्द गरिएको हो ।
निर्माण लम्बिँदा लागत रु ६७ करोड ६० लाख बढी लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ । शुरुमा रु तीन अर्ब ९६ करोड लगानीमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि बढेर हाल रु चार अर्ब ६३ करोड ६० लाख लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु १८ करोड ५४ लाख लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ६७ लाख ८४ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाको बाँधस्थल लोदो खोलाबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ र त्यत्तिकै लामो पेनस्टक पाइपमार्फत दोर्दी खोलाको पानीलाई विद्युत्गृहमा झारिने छ ।
ग्रिनलाईफ हाइड्रोपावरले बोलायो २ वर्षको वार्षिक सभा, कहाँ र कहिले ?
भर्नुभयो त ? युनाईटेड इदी–मर्दीको आइपिओमा लगानी गर्ने अन्तिम मौका आज !
शेयर अभौतिकीकरण गराउन लिबर्टी इनर्जीको आग्रह !